Filimka cabsida iyo shactirada isku jiro Abhinetri 2 hogaamiyaal ka yihiin Tamannaah and Prabhu Deva maalinta berito ah ayaa goos goos kooban laga soo bandhigaa waxaana la qorsheenaa in filimkan tiyaatarada la saaro 1 May 2019.
Waxaa si rasmi ah loo soo bandhigay goos gooska dhameestiran filimka ABCD ee Allu Sirish hogaamiye ka yahay waxaana mashruucan la daawan doonaa 17 May 2019 waxaana atirisho kowaad ka ah Rukshar Dhillon halka Sanjeev Reddy uu Director ka yahay filimkan Telugu ah.
4-maalmood ayaa ka hartay daawashada filimka Jersey ee hogaamiyaha ka yahay Natur Star Nani waxaana la jileyso atirishada Shraddha Srinath waana filim Telugu ah oo siweyn loo wada sugaayo.
Naga Chaitanya iyo Samantha filimkooda Majili ayaa Blockbuster inuu noqdo qarka u saaran madaama uu 10-maalmood 50 Crore soo xareeyay welina qoysaska siweyn u daawanayaan.
Sai Dharam Tej filimkiisa Telugu ah Chitralahari ayaa ganacsi wanaagsan sameeyay sedexdiisa maalmood ugu horeyso wuxuuna keenay 16.20 Crore ganacsigiisa dibad iyo dal waxayna kooxda cajaladaha qeybiyaan ka heleen 9.20 Crore waxaana xusid mudan in markii hore xuquuqda qeybintiisa cajaladaha lagu iibsaday 14 Crore.
4-maalmood ayaa ka harsan daawashada filimka sida weyn loo wada sugaayo ee Tamil-ka ah Kanchana 3 waxaana hogaamiye ka yahay Ragav Lawrence oo sidoo kalena Director ka ah mashruucan caanka ah.
Bisha August 2019 Koonfur Hindiya aflaan waa weyn ayaa laga daawan doonaa waxayna kala yihiin Ner Konda Paarvai (10 Aug) waxaa hogaamiye ka ah Ajith Kumar, Saaho (15 Aug) waxaa hogaamiye ka ah Prabhas iyo Kaappaan (30 Aug) waxaana hogaamiye ka ah Suriya.
Waxbaa ka dhacay waxaa siweyn loo hadal hayaa gooska filimka Kannada ama shirkada gobolka Karnataka ka jirto sameeyay ee lagu magacaabo Rustom waxaana hogaamiye ka ah Shivrajkumar sidoo kalena Vivek Oberoi, Shraddha Srinath, Rachita Ram iyo Mayuri Kyatari ayaa doorar muhiim ah filimkan ku leh.